Kuongorora Keyword Chinzvimbo Kugovaniswa? | Martech Zone
Kuongorora Keyword Chinzvimbo Kugovaniswa?
Wednesday, April 20, 2011 Mugovera, Gunyana 19, 2015 Douglas Karr
Sezvo injini yekutsvaga ichienderera ichidzikisira mitengo kune vatengi vedu, tinoshanda nesimba kuti vazviratidze zvakanaka. Paunenge uchiedza kurongedza pamashoko mashoma, zviri nyore kuona kana urikuita zvinhu chaizvo… uchishandisa chishandiso senge Chiremera Labs, iwe unogona kuongorora zuva nezuva chinzvimbo. Isu tinoita izvi kune vese vedu vatengi.
Nekudaro, kune vamwe vedu vatengi vane huwandu hwakakosha hwemazwi akakosha avakatarisana nawo, isu tinodhonza mishumo kubva kune chishandiso senge Semrush kuti vaone ese mazwi akakosha avakaisa pamusoro uye vozoongorora kugovera kwavo.
Izvo zvakajairika kune yepamusoro saiti chinzvimbo chakakwira kwazvo pamazhinji mazwi akakosha wobva waenda munzira. Nzvimbo dzakashata dzinotarisana nebhero curve sezvaunoona pamusoro, neruzhinji hapana pari padhuze peji rekutanga. Usatenda hype kubva kune SEO vakomana vanotaura nezve peji 1 chinzvimbo ... iwe unofanirwa kupinda mune iwo epamusoro masheji pane peji 1 kana uchinyatsoda traffic.
Sezvo isu tichishanda nevatengi, isu tinoramba tichiongorora yavo yakakosha kero renzvimbo kugovera kuona kuti curve iri kufamba kubva kurudyi kuenda kuruboshwe - uye kwete kubva kuruboshwe kuenda kurudyi. Kune vamwe vedu vatengi vane hombe kugovana netiweki, tiri kuona iyo curve inofamba nenzira isiri iyo. Izvi zvinoreva kuti huwandu hwenzvimbo yacho saiti iri kuramba ichidonha. Isu tichataura nezve izvo zvinogona kuitwa kudzosera izvo mune inotevera posvo - ini ndanga ndichida kuzivisa vanhu kune ichi kugovera.
Ndinoona zvichinakidza kuti masayiti anowanzo kuverengerwa mumapoka akaita seaya uye haana kugoverwa zvisina tsarukano munzvimbo yese. Takaita ongororo iyi kune vakawanda vatengi hombe uye panogara paine boka rakafanana. Ini ndinofunga hazvishamisi kune vamwe vanonzwisisa iyo Google Pagerank algorithm.
Tags: gurukeyword chinzvimbokeyword chinzvimbo kugoverakeyword kuerachinzvimboinjini yekutsvagamazwi akakoshaseo chinzvimbo
Kurumidza Kumhanyisa WordPress neAmazon uye W3 Yese Cache
Kudzoreredza kubva kuGoogle Panda